एक कम्युनिस्ट नेताको घरमा १२० क्विन्टल सुन भेटियो, खातामा ४१ खर्ब ४० अर्ब रहेको खुलासा ! – Life Nepali
एक कम्युनिस्ट नेताको घरमा १२० क्विन्टल सुन भेटियो, खातामा ४१ खर्ब ४० अर्ब रहेको खुलासा !
कम्युनिस्ट नेताको घरमा १२० क्विन्टल सुन भेटियो, खातामा ४१ खर्ब ४० अर्ब रहेको खुलासा ! हेर्नुहोस विवरण सहित ।एक कम्युनिस्ट नेताको घरबाट १२ हजार किलो सुन र बैंकमा ४१ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ खुलासा भएको छ । आजको विश्वमा चीन एक शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको देश हो । चीनले केही दशकमा गरेको विकासले विश्वलाई चकित बनाएको छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
चीनले भ्र’ष्टाचार वि’रु’द्ध देखाएको साहसले विश्वलाई एक नयाँ पाठ सिकाएको छ । यो बीचमा चीनमा एक ड’रलाग्दो घ’ट’ना बाहिर आएको छ । चीनको हेनान प्रान्तका एक प्रभावशाली कम्युनिस्ट नेताको घरबाट १२ हजार किलोभन्दा बढी अ’वै’ध सुन फेला परेको छ । ५८ वर्षको झाङ कीको घरबाट ५६ करोड ८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको अवैध सुन फेला परेको जनाइएको छ । यस्तै उनको बैंक अकाउन्टमा ३६ अर्ब अमेरिकी डलर ९४१ खर्ब ४० अर्ब नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी सम्पत्ति देखिएको छ ।
यो सबै पैसा उनले भ्र’ष्टा’चार गरेर कमाएको आ’शंका गरिएको छ ।उनलाई कम्युनिस्ट पार्टीबाट ब’र्खा’स्त गरिएको छ । यदी झाङको सम्पत्ति वै’ध भएको भए उनी चीनका धनाढ्य ज्याकमा भन्दा पनि धनी हुने थिए । फोर्ब्सका अनुसार ज्याक माको सम्पत्ति ३७ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा । **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
Next आ,रोपी घरबेटीलाई लिन मन्त्री नै गएपछि रूपाले भनिन्- सरकारले यस्तो गर्छ भन्ने अपेक्षित नै थियो